Ity tranomboky virtoaly ity dia ahitana ny boky rehetra sy ny asa hafa nataon'i Harold W. Percival. Ny fanontana dia nosoratan'i Mr. Percival ho an'ny gazetiny isam-bolana, The Word, izay navoakan'ny 1904 sy 1917. Ny Teny dia nahitana ny Q & A, "Moments with Friends," izay nanontaniany an'i Percival ny fanontaniana avy amin'ireo mpamaky azy. Ny fandikana ny fomba fitenin'ny Thinking and Destiny sy ny lahatsary momba ny fisainana sy ny fahaverezana ary ny mpanoratra dia tafiditra ao koa.
Ireo boky Percival dia azo jerena amin'ny e-boky avy amin'ny mpivarotra lehibe.
Ireo mpanoratra lahatsoratra nosoratan'i Harold W. Percival dia mampiseho ny famoriam-bola manontolo navoaka tao The Teny gazety eo anelanelan'ny 1904 sy 1917.
Jereo ny Editorials ➔
"Fotoam-bavaka miaraka amin'ny namana" dia singa Q & A The Teny gazety. Teo anelanelan'ny 1906 sy 1916 dia nisy fanontaniana napetrak'ireo mpamaky The Teny ary novalian'i Mr. Percival
Hijery fotoana miaraka amin'ny namana ➔
Chapitre I, l'Introduction to Fisainana sy faniriana, dia nadika tamin'ny fiteny hafa.
Ny pejin'ny Video dia mirakitra fampisehoana an-tsary ny pejy voalohany 3 ao amin'ny Fampidirana. Ity famakiana ity, amin'ny fampiasana ny tenim-pon'i Percival, dia manolotra fomba fijery tsy mahazatra Fisainana sy faniriana nosoratana.
Jereo ny horonan-tsary ➔
Hivereno havanana hijerena ireo rohy rehetra.